China Mobile phone accessories kitapo sy mpanamboatra | Hong Bang
Ny kitapo ziplock mitsangana dia endrika famonosana malaza indrindra amin'ny tsena satria ity karazana fonosana ity dia mahomby sy azo ampiharina ary manintona. Araka ny tondroin'ny anarana azy manokana, ireo kitapo ireo dia afaka mijoro amin'ny faritra sarotra rehetra. Izy io dia manana fahaiza-manao fampisehoana talantalana lehibe ary azon'izy ireo atao ny mampihena ny filan'ny fitehirizana ary mampitombo ny haben'ny talantalana. Matetika, ny paosy mitsangana dia ampiasaina amin'ny sakafom-bary, fofona, firavaka, dite na kafe, Sakafo alika, Sakafo Pet, ary fonosana kojakoja finday.
Fananan'ny Kitapo Ziplock
Ny Pet Food Stand Up Pouch dia novokarina avy amina sosona maromaro an'ny sakana izay azo sokajiana ho vondrona lehibe 3, izay miaraka manome ny paosin'ireo toetra maharitra sy mahatohitra tohotra. Ireto vondrona 3 ireto dia:
Fiarovana sy kalitao avo lenta no ho fitsipika voalohany ho antsika. Ny vokatray rehetra dia vita amin'ny akora ara-tsakafo izay midika fa ny sarimihetsika ampiasainay, ny ranomainty ary ny tsipika famokarana dia fiarovana 100% ho an'ny ankizy lehibe na kely aza. Ankoatr'izay, henjana izahay amin'ny kalitao izay midika fandeferana aotra amin'ny endrika marimaritra iraisana izay mampiseho amin'ny fananganana matanjaka, ny fahateren'ny rivotra ary ny fanontana mazava. Ny fametahana lalao marefo sy lavorary miaraka amin'ny fangatahan'ny mpanjifa dia ho tanjontsika hatrany.
Ny endri-tsarin'ny kitapo Ziplock mijoro
Famantarana ny famoaka
Friendly any ivelany
Mavesatra sy mora entina
Tsy misy ny fandanjana lalao mora hijoro
Bpa, lead, Pvc, tsy misy phthalate
Teo aloha: Kitapo sakafo ho an'ny biby fiompy
Manaraka: Paosin'ny spout